Isibonelelo esihle kwimepapack yemixholo yeWordpress kwi-60% yokonga | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Unikelo olukhethekileyo: gcina i-60% kule pakethi mega yemixholo yeWordPress evela kwiVirtualodo
UManuel Ramirez | | Uyilo lwewebhu, Wordpress
Nokuba usebenza njenge-freelancer okanye unayo iarhente, unayo ipakethi mega yemixholo yeWordPress ibalulekile. Ngokukodwa ukuze ubenakho ukunika umxhasi umxholo osemgangathweni kwaye ulungele yonke into elindelweyo yangoku, njengayo nayiphi na imixholo ye-29 ye-WordPress kule pakethi mega.
Kule pakethi mega yeVisualmodo WordPress imixholo siza kufumana iinjongo ezahlukeneyo kunye nemixholo. Oko kukuthi, sinokuba neyodwa ekhethekileyo kulowo mthengi ofuna ibhlog yesitayile, okanye omnye ofuna i-Ecommerce. Ayisiyiyo loo njongo kuphela, kodwa iivenkile zefanitshala, iihotele, abayili bangaphakathi, izikolo, iivenkile zokutyela, abafoti kunye nokunye okuninzi. Masikwazise kule pakethi ye-mondo mega ebonakalayo onokuyifumana kwesi sibonelelo nge-60% yokonga, i-39 $ kuphela
1 Ezona mpawu ziphambili
2 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Uyilo
3 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: yeNtengiso
4 Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress zeMiboniso: iMarvel
5 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Rare
6 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Incopho
7 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Spark
8 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Stream
9 Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: Umtshato
10 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Ukomelela
11 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umda
12 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: iZenith
13 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Gym
14 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Ukutya
15 Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: ngaphaya
16 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVidiyo: iMidlalo
17 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Ink
18 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Zonyango
19 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Nectar
20 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Indlu yewayini
21 Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress zeMiboniso: iMechanic
22 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeWindowsmodo: Ukwakhiwa
23 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umhambi
24 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualmodo: Salon
25 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umculo
26 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Qalisa kwakhona
27 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Ihotele
28 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodoodo: I-Cryptocurrency
29 Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: Kumnyama
30 Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: engenzi nzuzo
Ezi ziimpawu eziphambili yale pakethi mega yemixholo yeWordPress nguVenkilemodo:
Umakhi wephepha elibonakalayo leWordPress-Tsala kwaye ulahle ukuqamba iwebhusayithi okanye iwebhusayithi yenkampani yakho.
Iiaddons zangoku: Izinto zazo zonke iintlobo ukongeza ulwazi, indawo yokusekwa okanye loo khathalogu yamaxabiso ukhuthaza ngayo umthengi. Zonke ngoopopayi kunye nesitayile esihle kwinqanaba ngokubanzi.
Ngenisa ngonqakrazo olunye: Unokuba newebhusayithi yakho ngokucofa kanye ngale nto inkulu yeVisualmodo.
noluphendulayo: ezihlengahlengiswe kwizixhobo eziphathwayo ukunika onke amava anokubakho kubasebenzisi abanxibelelana neewebhusayithi zethu.
Umxholo ngokwezifiso: Zonke iintlobo zokhetho lwentloko, ii-slugs zesiko, amaphepha angama-404 akafumanekanga, utshintsho, ukhetho lweWooCommerce, ukhetho lweqela, ii-CTA, iifavicons, iphepha lasekhaya lesiko kunye nokunye okuninzi.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Uyilo
Inomdla ngokuxhomekeke kwizifundo zokwakha eqaqambisa intloko yayo kunye neeyure zokuvula kunye nenombolo yefowuni, kunye noluhlu lweempawu ezibekwe kwicala lasekunene le-Facebook, i-WhatsApp kunye nokunye.
Ukuqaqambisa uthotho lwezinto ezinje nge ikhawuntari yeenkcukacha-manani, umgca wexesha, iimephu zikaGoogle, amaqhosha aphambili okanye zonke iintlobo zeetafile kunye nezinto zolwazi. Zonke zenziwe ngoyilo olukhulu kwaye le vidiyo njengemvelaphi.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: yeNtengiso
Urhwebo luphawulwa nge eyona carousel ineqhosha le-CTA ezahlulwe ngokugqibeleleyo. Uhlobo olugqibeleleyo lwe-monochrome ye-eCommerce apho kufakwa khona isincamathelisi sokubhaliweyo ukuze xa umthengi eskrolela ezantsi, banokufikelela kwezona ndidi zibalulekileyo kunye neendawo zewebhusayithi yethu.
Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress zeMiboniso: iMarvel
Ukumangaliswa sisifundo esona sahluke ikakhulu yintloko esecaleni. Ngamanye amagama, zonke izithuba ezibalulekileyo kwiwebhusayithi yethu ziya kuba kukucofa imouse ukusuka kwicala lasekhohlo. Ukuba siskrolela ezantsi siya kufumana oopopayi abagudileyo kunye nezinto eziphendulayo eziya kulungelelana ngokugqibeleleyo nefomathi yesixhobo esiyisebenzisayo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Rare
Ngokuqhelekileyo sibuyela kwintloko yesiqhelo ngakumbi kwaye yahlulwa kwakhona yile vidiyo ingemva. Umxholo omele imifanekiso yawo emikhulu kunye nokuchukumisa okuncinci kuyo yonke i-nook kunye ne-cranny. Ikwanentloko ebambekayo yokushiya umsebenzisi phambi kokhangelo, inqwelo kunye nemenyu yehamburger njengezinto zokuqaqambisa.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Incopho
Apha siyalibala iifowuni zonxibelelwano kunye nezo zonxibelelwano zentlalo Ngomxholo obonisa i-carousel kwiscreen se-splash. Kwakhona imifanekiso emikhulu eneenyawo ezisebenzisa iiwijethi ezahlukeneyo kunye nazo zonke ii icon zentlalo eziya kuthatha undwendwe kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zentlalo. Kwakhona umxholo onesitayile esihle.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Spark
I-Spark iza ngokungagqibekanga ngothotho lweeopopayi ekukrwebeni okunika indlela kwizinto ezahlukeneyo ezinokuza sifuna ukwenza iwebhusayithi. Njengabanye, inesihloko esincangathi, imifanekiso emikhulu kunye Uhlobo lombala kufutshane nendalo yokufota. Ukuba lowo ngumxholo wakho, lo mxholo ugqibelele kuwo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Stream
Ukusasaza kusibonisa ngokukrola ngokukhawuleza nganye nganye kwezi zinto zibalulekileyo zemizobo ezinje ngeMaphu zikaGoogle. UKUYA ukuqaqambisa umsebenzi owenziwe kwi-carousel oopopayi obahlukileyo owaziwayo kutshintsho kunye nokukwazi ukuhambisa ividiyo kunye nefuthe kutyelelo. Siyakumema ukuba ucofe ii icon ezisecaleni ukuze uzame oku kuthethiweyo.
Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: Umtshato
Umxholo okhethekileyo wemitshato kunye nezinto ezifanayo uthe ukuza kuthi ga ngoku kwaye a uthotho lwemigca emi nkqo edibanisa izinto ezahlukeneyo malunga nokuba yeyiphi iphepha lokuqala lokufika. Imifanekiso emikhulu ukubonisa izakhono zomfoti oza kuba ngumlawuli womtshato.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Ukomelela
Ngokomelela sibuyela kwidatha ebalulekileyo ye Nxibelelana nenkampani okanye inkonzo, njengawo wonke loo mgca mkhulu weempawu zentlalo ukufikelela kwi-Facebook, kwi-Twitter, kwi-Skype, okanye kwi-WhatsApp. Ngeefoto zabathengi sinokwenza ukuba iwebhusayithi yabo yenziwe i-jiffy ukuba siyayazi indlela yokusebenzisa i-WordPress kakuhle kunye nale mxholo mkhulu weendawo zokuzilolonga.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umda
I-Edge yimixholo eyenzelwe oosomashishini izinikele ekubonisaneni kuzo zonke iinkalo zayo. Isebenzisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ukumilisela ukuzithemba kumthengi ekunikezelayo ngeli phepha lewebhu. Inazo zonke ezi zinto zingasentla ngemifanekiso engaphezulu, ubuchwephesha bokuchwetheza, kunye noluhlu lotshintsho olugqityiweyo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: iZenith
I-Zenith isekwe kwintloko engwevu emnyama, ithoni ye-violet njenge-aksenti kuyo izinto ezahlukeneyo kunye nefonti emhlophe oko kuthatha lonke udumo lwendawo. Eminye ichongiwe ngombala we-violet oya kuthi ukhukule ezona ndawo zibalulekileyo zewebhusayithi ezikhethwe ngumthengi.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Gym
Okunye umxholo womthambo, nangona ngokwahluka kancinci kobuhle. Isebenzisa ubuchwephesha bokubhala ngqindilili ukugxila kwii-CTA nakwimenyu ephezulu enophawu lwentengiso olulandelayo olufana nolo lwefonti. Ukuba sikrola siza kufumana izinto ezahlukeneyo zomgangatho eziza kule pakisha mega.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Ukutya
Ukutya ngumxholo onemifanekiso kububanzi obupheleleyo okanye ubungakanani obupheleleyo nge I-typography entle kunye ne-carousel emema undwendwe ukuyeka ibha yomthengi okanye irestyu. Olu luvo lokuqala olugxininisa amanqaku okwahlula itafile okanye inkonzo yebar yokusekwa kwabaxhasi. Ingakumbi ividiyo yebhiya. Ukuba sifumana into efanayo, siya kuyinika inqaku.
Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: ngaphaya
Ngaphaya kujike kube mfusa nge Intloko enomdla kunye nomfanekiso wephepha lodonga yiyo yonke into ngalo mbandela, ubuncinci de siqale ukuskrola. I-header ibonakala ngokungafihlisiyo yokuqhubeka nokunika konke ukubalasela kumfanekiso ongemva kunye ne-typography ebalulekileyo. I-CTA nayo iyayenza into yayo, nangona ibonakala ngendlela emanyumnyezi.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVidiyo: iMidlalo
Umxholo osebenza ngokugqibeleleyo njenge-eCommerce enoluhlu lwezinto ezikwi-bar esecaleni njengeemveliso eziphezulu okanye ukukhangela. Amaphepha emveliso nawo agqityiwe nge- I-CTA etsala amehlo ngombala omnyama ngombhalo omhlophe. Umxholo wokuwusebenzisa njengoko usifanela kwaye utsala umdla wenxalenye ye-eCommerce.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Ink
Inokulungela imagazini yemixholo eyahlukeneyo ezinxulumene nokuhamba okanye ukuzonwabisa. Inemenyu emibini ephezulu kunye nebha yonke yokufikelela ngokuthe ngqo kuthungelwano lwentlalo. Enye yeemxholo ezifanelekileyo kwiiblogi ezinesihloko esihle kakhulu. Asilibali incangathi enkulu yemilinganiselo emikhulu ukuze kungabikho nto ilahlekileyo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Zonyango
Umxholo obonisiweyo weenkonzo zonyango zazo zonke iintlobo ngokunokwenzeka ube yiklinikhi yamazinyo. Siphinde saba nayo yonke ingqwalaselo, indawo kunye nedatha ye-imeyile, kunye nothotho lweempawu zokufikelela kunxibelelwano lwasentlalweni. Ukwahlula ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukungqina ngokwaso kunye nokutsala umdla wotyelelo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Nectar
Omnye umxholo weenjongo ezininzi oza kuwusebenzisa njengebhlog okanye i-eCommerce uqobo. Sincoma owokuqala xa unochukumiso engaqhelekanga kancinci okwangoku. Ukuba into oyifunayo kukuthengisa iinkonzo, icala layo le-eCommerce linokuba nomdla ukuze umthengi abe nayo yonke into eneNectar.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Indlu yewayini
Indlu yewayini ibonakaliswa yi i-header eneempawu ezahlukeneyo kunye nelogo ephambili. Ilungiselelwe ukusuka kwindawo esembindini wentloko ukuze sikwazi ukuskrolela kwizinto ezahlukeneyo zolwazi ezihlala zihambelana nolu hlobo lwamaphepha okufika okanye iwebhusayithi. Ukuphakama kwayo yonke into enxulumene nehlabathi lewayini.
Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress zeMiboniso: iMechanic
I-Mechanic yimixholo yeenjongo ezininzi iyahambelana neWoocommerce, Elinye lawona maqonga abalulekileyo okusungula ivenkile yakho ekwi-intanethi. Iyabonakaliswa yile mibala ebomvu yee icon kunye nevenkile apho siza kufumana khona iiwijethi zemveliso ephezulu kunye nephepha lemveliso elenziwe kakuhle elinobuchwephesha obuchanekileyo nobuchanekileyo balo mxholo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeWindowsmodo: Ukwakhiwa
Umxholo obekelwe ulwakhiwo kunye nokunikezela ngeenkonzo zabo bonke abo iinkampani ezinakho ukwakha izakhiwo zizonke. Ukuqaqambisa i-carousel ngothotho lweeopopayi ezikumgangatho ophezulu kunye neefoto ezithile ezinako ukuthatha lonke udumo lwendawo. Umbala otyheli ukhethelwe ilogo kunye nokuqaqambisa iimenyu ezahlukeneyo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umhambi
Omnye umxholo ojolise kuwo i-carousel epheleleyo kunye ne-hue eluhlaza yee-H2s zayo. Unxibelelwano olucocekileyo ngazo zonke iindlela kunye noluhlu lwezinto ezihlala kuzo zonke iziza zewebhusayithi esiza kuzakha ngeWordPress. Inxalenye ye-eCommerce kukudodobala, kodwa yanele kwezinye iimeko.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualmodo: Salon
Ukuba umthengi une umchebi weenwele okanye isaluni yobuhle, Lo mxholo ucacileyo ngoyena unokuthi umshiye eqinisekile ukuba athathe iinkonzo zakho. Intloko epheleleyo ene-typography egqibeleleyo kunye noluhlu lwezinto zokwazisa undwendwe ngazo zonke iinkonzo zobuhle. Icandelo le-eCommerce lihamba kunye, nangona kunjalo lisisiseko ngaphandle kwayo nayiphi na into eyonwabisayo.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Umculo
Umculo ufuna isitayile esahluke ngokupheleleyo nge iphaneli yolwazi yekonsathi, ikhonkco lokudlala kwakhona kwi-Soundcloud, kunye newijethi yolwazi malunga nebhendi ukugxininisa isimbo sabo somculo kunye nembali. Akukho mfuneko yokuba ibe nenjongo ezininzi, ke ukuba umthengi kufuneka athengise ukuthengisa, ngakumbi ngokugqibeleleyo. Omnye umba oza kuthathelwa ingqalelo ngumthengi othile.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: Qalisa kwakhona
Qalisa kwakhona ngokufuna ubuncinci kunye nomxholo omnyama nomhlophe ukuze ume. Uya kuyifumana ngolu hlobo ukusuka kwintloko ukuya kwinxalenye yamaxesha okuqala xa siskrola. Yi isihloko sinikezelwe ngakumbi kwipotifoliyo kunye nokufundisa ngezakhono zobugcisa yomthengi. Inetemplate enxibelelana eyenziwe kakuhle apho umthengi anokufumana khona ii-imeyile malunga nemisebenzi yexesha elizayo. Umxholo owongeza iindidi kule pakisha mega yemixholo yeWordPress
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress Visualmodo: Ihotele
Umxholo okhethekileyo weehotele apho iinkcukacha ezibonakalayo zithatha ukubaluleka okukhulu. Uthotho olupheleleyo lwe izinto ezintle ukutsala iliso lendwendwe kwaye uhlale uqhelene nenkonzo nganye yehotele okanye inkampani yomthengi. Landela yonke into ethethwa ngesihloko ngasinye kolu luhlu ngokhetho olukhulu kwaye ulungele ukuhlelwa.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodoodo: I-Cryptocurrency
Ngayo yonke into eyenzekayo ngeemali zedijithali, esi sihloko ilungele ukubonisa umfanekiso omkhulu ongasemva, ukutshintshiselana nge-bitcoins, ukhetho onokukhetha kwiidola okanye i-euro, kunye ne-CTA ekulungele ukucofwa lundwendwe. Sijongene ne-carousel kunye nomxholo apho sinokukhetha ukuyiguqula ibe yi-eCommerce nolunye uhlobo lwesitayile. Kubalulekile ukulinganisa ukubaluleka kombala ngamnye okhethiweyo ukuze ukwazi ukwahlula iimali ezahlukeneyo kunye nokwehla kunye nokunyuka kwamaxabiso.
Uyabona ukuba bazikhathalele iinkcukacha kule Umxholo wedijithali ngawo ukubonisa ipakethi enkulu yeemixholo yeVisualmodo yeWordPress oza kuba nayo esandleni sakho xa uyifumana ngexabiso elikhulu.
Ipakethi yeMega yezihloko zeWordPress ezibonakalayo: Kumnyama
Ubumnyama yimixholo emnyama kakhulu enezinto ezibonakalayo ezibonakalayo ezifuna ukuzishiya kude nakolu luhlu. Sibuyela kwicala lasekhohlo kunye nayo yonke imenyu, iindlela ezimfutshane kwinethiwekhi yoluntu kunye nelogo ebekwe phezulu. I-header esecaleni incangathi, ukuze ujonge lonke iphepha lokufika ukuze ufumane zonke izinto ezinesihloko ngesihloko.
Yonke into kwesi sihloko ijolise ebumnyameni, ukuze iimveliso zemidlalo ezigabadeleyo inokuba yinto efanelekileyo. Ayisiyo eCommerce, kodwa inokusetyenziselwa iibhloko.
Ipakethi yeMega yemixholo yeWordPress yeVisualodo: engenzi nzuzo
Sigqiba ngesihloko zinikezelwe kwiiNGO. Yinjongo ezininzi, ke inokusetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Umbala oluhlaza ophambili kuyo yonke indawo kumxholo okhethekileyo ngenxa yomxholo wombutho ongajonganga nzuzo.
Ukuba ujonga imixholo elungileyo ungathandabuzi kwaye usebenzise eli thuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Wordpress » Unikelo olukhethekileyo: gcina i-60% kule pakethi mega yemixholo yeWordPress evela kwiVirtualodo